Faafitaanka Coronavirus wuxuu saameeyaa Lambarka Rakaabka Marmaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFaafitaanka Coronavirus wuxuu saameeyaa Tirada Rakaabkii Marmaray
Faafitaanka Coronavirus wuxuu saameeyaa Tirada Rakaabkii Marmaray
13 / 03 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
coronavirus ka dillaacay tirada safarka marmaray
Coronavirus dillaacay, taas oo ka dhigtay gaadiidka ee ugu mashquulsan Marmaray Turkey ee dadweynaha ayaa sidoo kale saameeyeen. In Turkey, ka dib markii lagu dhawaaqay kiiska ugu horeysay lagu arkay dalka 450 460 kun oo Marmaray rakaabka qaado maalin kasta, si 420-430 oo kun oo dhacay. Waxaa la sheegay in ay dhici karto inbadan. Waxaa la sheegay in muwaadinku, haddii ay suurta gal tahay, uu diiradda saarayo gaadiidka shaqsiga halkii uu ka noqon lahaa wadareed wuxuuna diiradda saarayaa safarka gaari.
Haberturk 'Sida ku cad warkii Ten Olcay Aydilek; Kiiska labaad ee Turkey coronavirus waxaa la ogaado. Kadib ku dhawaaqidii rasmiga ahayd ee ku saabsan bukaankii ugu horreeyay, waxaa jiray wareeg, gaar ahaan gaadiidkii dadweynaha, oo loo gudbiyey shakhsiga. Muwaadiniinta, kuwaas oo sii wata ka-faa'iideysiga nidaamyada gaadiidka dadweynaha, waxay isticmaalaan tallaabooyin "shaqsiyeed" ah si looga fogaado inuu ku dhaco cudurka tareenka dhulka hoostiisa mara, tareennada magaalada ku teedsan iyo basaska magaalada ama basaska yar yar, halka qaar ka mid ah muwaadiniinta qaarkood ay ku safreen baabuur iyaga oo ah cabbir shaqsi cusub.
XIGASHO 420 KOOBAN
Calaamadda ugu horreysa ee tan ayaa ka timid Marmaray. Magaalada Marmaray, 450 ilaa 460 kun oo rakaab ayaa maalin walba la dhoofiyaa iyadoo la raacayo xaalado caadi ah. tirada rakaabka in muddo gaaban ka dib sharaxaad ka mid ah kiiska ugu horeysay lagu arkay Turkey hoos ku dhowaad 10 boqolkiiba ahayd. Tirada rakaabka maalin walba waxay hoos ugu dhacday 420-430 kun. Waxaa la sheegay in ay dhici karto inbadan.
Faafidda Coronavirus ayaa jabinaysa silsiladda sahayda ah!
Tirada rakaabka rakaabkii Marmaray 295 ayaa ka badiyay Milyan
Marmaray way ku guul darreysatay in ay la wareegto rakaabkii la beegsaday
Gölcük iyo Kartalkaya waxay ku riyaaqeen quruxda munaasabada barafka (Sawir Sawir)
Dabayl aad u daran ayaa saameeyey Xarunta Dhexe ee Erciyes
Nooca Uludagda ayaa si xun u saameeyay fasax sameeyayaasha
TCDD oo ku saabsan Duulimaadka Tareenka